सपना, देख्तादेख्तै- विविधा - कान्तिपुर समाचार
यमराजले भने, 'तुरुन्तै यो घर भत्काइहाल् । नत्र यहीं तेरो ज्यान लिन्छु र तँलाई कुम्भीपाक नरकमा लगेर हाल्छु ।'
फाल्गुन २९, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
अनि हजूरबाले भन्नुभयो : म तीन दाजुभाइका तीन कथा सुनाउँछु, ल सुन ।
एकादेशमा तीन दाजुभाइ धन कमाउन भनेर परदेश हिंडेका थिए । तीन दिन जंगलै जंगल हिंडेपछि एउटा गाउँमा पुगे र अँध्यारो पाटीमा कुम्लोकुटुरो बिसाए । भोकले हत्तू भएका थिए, आफूले ल्याएको सातु खाए र पानी पिए । एकछिन थकाइ मारेपछि सल्लाह गरे— मीठोमसिनो नखाएको निकै दिन भयो, आज टन्न खीर खानुपर्छ ।
एउटा भाइले गाउँबाट दूध ल्यायो, अर्काले चामल र अझ अर्काले सक्खर । अनि आगो बालेर मजासँग खीर पकाए । मगमग बास्ना आइरहेको थियो, चाटीचुटी पारेर एक्लै खाइदिऊँ जस्तो ।
दाजुहरू आफूलाई निकै चलाख ठान्थे । माइलाले जेठासँग कानेखुसी गर्‍यो र कान्छालाई भन्यो, ‘अहिले सातु खाइहालियो । यो खीर यत्तिकै राखेर सुतौं । राति जसले सबैभन्दा राम्रो सपना देख्छ, भोलि बिहान उसैले जम्मै खीर खाने ।’
खीरको भाँडो सिलाबरको थालले छोपेर तीनै जना सुते । बिहान घाम झुल्कन लाग्दा जेठो जर्‍याकजुरुक उठ्यो र
ऊसँगै माइलो पनि । कान्छो भने मस्त सुतिरहेको थियो । उनीहरूले उसलाई पनि ब्यूँझाए । ऊ आँखा चिम्लेर ओछ्यानमै पल्टिरह्यो ।
जेठाले भन्यो, ‘हन हौ माइला, तैंले कस्तो सपना देखिस् ? सुना न ।’
माइलाले भन्यो, ‘म एउटा दरवारमा पुगेको रहेछु । राजाले मेरो भव्य खातिरदारी गरे । मीठा मीठा पकवान खुवाए, नरम गद्दामा सुताए । राजकुमारी असाध्यै सुन्दर रहिछन् । उनले मलाई मन पराइन् । मैले पनि मन पराएँ । हाम्रो बिहे हुनै लागेको थियो, तपाईंको कुहिनाले लागेर ब्यूँझिहालें ।’ अनि सोध्यो, ‘तपाईंले चाहिं कस्तो सपना देख्नुभो नि, दाजु ?’
जेठाले बयान गर्‍यो, ‘म एउटा नदी किनारमा पुगेको रहेछु । त्यहाँ एक जना सिद्ध पुरुष भेटिए । उनले मलाई उडाएर स्वर्ग पुर्‍याए । इन्द्रको सभामा अप्सराको नाच चलिरहेको थियो । मलाई सम्मानसाथ उच्च आसनमा राखे । स्वर्गको दिव्य खानपीन गराए । इन्द्र महाराजले भने— अब एक महीना स्वर्गमै बसेर सुखभोग गर्नोस् । म इन्द्रको दरवारमा अतिथि भएर बस्न थालें । दुइटी अप्सरा मेरो सेवा गर्दै थिए, त्यही वेला ब्यूँझिहालें ।’
‘तपाईंको सपना मेरो भन्दा कहाँ हो कहाँ राम्रो रहेछ हौ दाजु,’ माइलाले आँखा झिम्क्यायो, ‘अब खीर तपाईं नै खानोस् । उब्रियो भने अलिकति मलाई पनि दिनुहोला है !’
जेठाले खीरको भाँडातिर हेर्‍यो र घुटुक्क थूक निलेर कान्छालाई घचघच्यायो, ‘हन हौ कान्छा, अब तेरो पनि सपना भन्दिहाल् न ।’
कान्छो अल्छी मान्दै उठेर बस्यो र भन्न थाल्यो, ‘मैले त सारै नराम्रो सपना पो देखें हौ दाजु ! निदाएको मात्र थिएँ, कताकताबाट एउटा राक्षस आइपुग्यो । जीउभरि झ्यापझ्याप्ती रौं, लामालामा नङ्ग्रा, ठ्याक्कै भालुजस्तो । उसले मेरो घाँटी समात्यो र खीरको भाँडोतिर देखाउँदै भन्यो— त्यो खीर तुरुन्तै चाटीचुटी पारेर खा, नत्र तँलाई मार्छु । खीर नखाए ज्यान जोगिने थिएन । त्यसैले मन नलागी नलागी खीर खानुपर्‍यो नि हौ । अहिलेसम्म पेट अटेसमटेस भइराख्या छ ।’
‘हन, के भन्छ यो ? सपनाको कुरा गरेको कि बिपनाको ?’ जेठाले भाँडामाथिबाट सिलाबरको थाल हटायो । नभन्दै खीर बाँकी थिएन । दाजुहरूको चालामाला बुझेको कान्छो, उनीहरू घुर्न थालेपछि बेलुकै खीर बजाएर सुतेको थियो ।
कथा सुनिरहेकी बहिनी कान्छाको बठ्याइँ सुनेर दंग परी र ताली बजाउन थाली ।
‘त्यसपछि के भो, हजूरबा ?’ भाइले सोध्यो ।
अनि हजूरबाले भन्नुभयो : अब अर्को कथा सुन ।
१२ वर्ष परदेश घुमेर धन कमाएपछि उनीहरू फर्के र आआफ्नो घर बनाएर बस्न थाले । जेठो अनेक तिगडम गरेर ठूलो भइटोपल्न खोज्थ्यो, माइलो गाउँलेहरूलाई तर्साएर भाले पल्टेको थियो, कान्छो बाह्र सत्ताइस गफ गरेर मान्छेलाई दंग पार्न उस्ताद थियो । उसको घर अरूको भन्दा चिटिक्क परेको, लोभलाग्दो थियो ।
एक दिन माइलाले भन्यो, ‘हन हौ भाइ, हामी एउटै बाबुका सन्तान, बेग्लाबेग्लै घरमा के बस्नु, एउटै घरमा बसौं न ।’
उनीहरू एउटै घरमा बस्न थाले । आआफ्नो घरका खाँबा, दलिन, बाकल, तख्ता, झ्याल, ढोका आदि ल्याएर दाजुहरूले दुई खण्ड जोडे र घर ठूलो पारे । गाउँमा सबैभन्दा ठूलो घर त्यही देखिन थाल्यो । मूल खण्ड कान्छाको छँदै थियो, ऊ तलामाथि बस्थ्यो ।
दुवै दाजुहरू त्यहीं उक्लिन चाहन्थे । उनीहरू आफूलाई निकै चलाख ठान्थे । जेठाले माइलासँग कानेखुसी गर्‍यो र कान्छालाई भन्यो, ‘घरमा सबैको कमाइ परेको छ । अब एक हप्ता सबैले सपना देख्ने । जसले सबभन्दा तगडा सपना देख्छ, मूल खण्डमा उही बस्ने ।’
‘रातिको सपना के सपना ? यसपालि दिउसो सपना देख्ने,’ माइलाले थप्यो । राति सपना देख्ने हुँदा कान्छाले खीर भ्याइदिएको उसले बिर्सेको थिएन ।
अनि उनीहरू दिउसै सपना देख्न थाले ।
हप्ता दिनपछि जेठाले भन्यो, ‘हन हौ, हप्ता दिन त बित्यो नि । अब आआफ्नो सपना सुनाओ न ।’
‘घरमा देखेको सपना घरमै बसेर के सुनाउनु ?’ कान्छाले भन्यो, ‘खोलापारि शिव मन्दिर छ, त्यहीं जाऊँ न ।’
‘हिंड् न त,’ दाजुहरूले भने र फटाफट शिव मन्दिरतिर लागे । उनीहरू मन्दिर पस्तैनथे र देउतालाई पनि ढोग्दैनथे । त्यसैले मन्दिर छेउको चौतारीमा आसन जमाए र आआफ्नो सपनाबारे सोच्न थाले ।
दिउसोको सपना त थियो, जसले जे चाहन्थ्यो, सातै दिन त्यही देखेको थियो । दुवैले फेरि एकपल्ट त्यही सपना देखे ।
जेठाले देख्यो : उसले नाना तिगडम लगाएर माइला र कान्छालाई कजाएको छ । दुवै जना उसका आज्ञाकारी बनेका छन् । ऊ मुखिया बनेर घरमा ढलीमली गरिरहेको छ । सारा गाउँलेहरू उसको जयजयकार गर्दैछन् ।
माइलाले देख्यो : उसले जेठा र कान्छाबीच झगडा लगाएर घर कब्जा गरेको छ । तिनीहरू एकअर्कालाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न चाहँदैनन् । उसलाई हाइसन्चो भएको छ । बुइँगलभरि नोटका बिटा खात लागेका छन् । गाउँलेहरू डरले चुइँक्क बोल्न सकेका छैनन् ।
दुवै जना आआफ्नो सपनामा मुग्ध थिए । त्यसैको तरंगमा उँघ्न थाले ।
अकस्मात् भुइँचालो गएजस्तो भयो । चौतारी थरर्र हल्लियो । पर केही भत्के–ढलेजस्तो आवाज आयो र कुइरीमण्डल धूलो उठ्यो । के भयो भनेर उनीहरूले भेउ नपाउँदै कान्छो आइपुग्यो ।
‘तपाईंहरू सपना देखेर बस्नुभा छ । उता घर ढलिसक्यो,’ उसले भन्यो, ‘त्यत्रो आवाज आएको सुन्नुभएन ?’
‘हन, के भन्छ यो ? त्यति बलियो घर कसरी ढल्छ ?’ जेठो च्याँट्ठियो, ‘अनि तँ चाहिं यतिन्जेल कहाँ थिइस् नि ?’
‘तपाईंहरू हिंडेको एक छिन पछि घरबाट निस्कनै लागेको थिएँ, झ्याप्प ढोकामै यमराज आइपुगे ।’
‘को यमराज ?’
‘उनै यमराज नि,’ कान्छाले भन्यो, ‘राँगोमा चढेका, राँगैजस्तो कालो वर्णका, राता आँखा र बाक्ला जुँघा भएका, एउटा हातमा डोरी र अर्कोमा काँडादार मुङ्ग्रो लिएका, हेर्दै डरलाग्दा...
‘उनले मलाई आदेश दिए— तुरुन्तै यो घर भत्काइहाल् । नत्र यहीं तेरो ज्यान लिन्छु र तँलाई कुम्भीपाक नरकमा लगेर हाल्छु । मैले यस्तो अन्याय नगर्नोस् भनेर हात जोडें, तर मानेनन् । भने— सबैभन्दा ठूलो न्यायाधीश मै हुँ । मैले जे भन्छु त्यही न्याय हो...
‘मैले धेरै रोइकराइ गरेपछि उनले घरको एउटा खण्ड जोगाउन छूट दिए । अनि मैले आफ्नो खण्ड जोगाएर बाँकी घर भत्काइदिएँ,’ दाजुहरूको दाउ हप्ता दिन अघि नै थाहा पाइसकेको कान्छो मुस्कुरायो, ‘तपाईंहरू अब कहाँ बस्ने, आफैं विचार गर्नोस् ।’
‘मारिहाल्यो नि बजियाले,’ माइलाले थाप्लामा हात राख्यो ।
‘फटाहाहरूलाई कान्छाले फेरि तीन चित ख्वाइदिएछ,’ कथा सुनिरहेकी दिदीले टिप्पणी गरी ।
‘त्यसपछि के भो हजूरबा ?’ भाइले सोध्यो ।
अनि हजूरबाले भन्नुभयो : तेस्रो कथा छोटो छ । अब त्यो पनि सुन ।
मूल घर भत्किएपछि दुवै दाजुहरूले पुराना बाकल, दलिन, तख्ता आदि भेला गरेर आआफ्ना घर बनाउन खोजे । तर जति गरे पनि पहिले जस्तो भएन । दुवैका घर चाँडै थोत्रिए र पाटी जस्ता हुन पुगे । केही दिन कान्छोको चकचकी उधुमै चल्यो । तर अलिक पछि उसको पनि त्यही हाल भयो । तीनै भाइ खोलो तरेपछि बिर्सिइएका लौरा जस्ता भए ।
बूढा र अशक्त भइसक्ता पनि तिनलाई सपनाको नशाले छोडेन । रातदिन तन्द्रामा हुन्थे र सपनै देखिरहन्थे । बीचबीचमा ‘म यस्तो थिएँ, म उस्तो थिएँ... त्यसो नभएको भए यसो गरिदिन्थें’ भनेर बर्बराइरहन्थे । कसैलाई भेट्यो कि च्याप्प समातेर आफ्नो गन्थन सुनाउन थालिहाल्थे । तिनको तालले छोरा, नातिहरू आजित भइसकेका थिए ।
एक रात नातिहरूले काजु, किसमिस, मह, केसर, के–के हालेको स्वादिष्ट दूध टक्र्याए । उनीहरूले थपी थपी टन्न दूध खाए र मीठो सपना देख्ने आसमा सिरक ओढेर घुर्न थाले ।
भोलिपल्ट उठ्ता उनीहरूले आफूलाई अज्ञात प्रदेशको वृद्धाश्रममा पाए ।
अनि हजूरबाले भन्नुभयो : के हुनु नि ? कथा सकियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७७ १०:००
जागिर छैन । राज्यले हेर्दैन । केटाहरुले पकेटखर्च निकाल्न एक–दुईवटा रमाइला भिडियो बनाए भने तपाईं–हाम्रो के बिग्रन्छ ?
फाल्गुन २२, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
दारूको अड्डाबाट धर्खराउँदै घर फर्किरहेको श्यामलालको आधा नशा चीसो स्याँठले उडाइसकेको थियो । पुसको घाम डुब्न लागेको थियो र उखुबारीको छायाले बाटो ढाकिसकेको । पिसाब फेर्न भनेर उखुबारीभित्र पस्ता कोही चिच्याउन खोजे जस्तो सुनेर उसका कान ठाडा भए । उसले आवाज आएतिर मुन्टो घुमायो । अलिक पर उखुबारीमै अस्वाभाविक हलचल भइरहेको देखेपछि उसको दिमागमा एकाएक बिजुली चम्कियो र बाँकी नशा पनि उत्रियो ।
उखुका पात र बोट पन्छाउँदै त्यहाँ पुग्दा उसले देख्यो, मुसहर टोलकी १८ वर्षे संगीता चार जनाको आक्रमणमा परेकी छ । एउटा उसमाथि घोप्टिएर मच्चिँदैछ र दुई जना दुईतिरबाट मोबाइलमा भिडियो खिचिरहेका छन् । चौथो पछाडि उभिएको छ, पालो पर्खिएर ।
तपाईं ठान्नुहोला, श्यामलालले ‘के गरेको यो ?’ भनेर उनीहरूलाई झम्टियो र उनीहरू संगीतालाई छोडेर कुलेलम ठोके । तर अहँ, त्यस्तो केही भएन । श्यामलाल भिडियोमा नपर्ने गरी अलि वरै उभियो । तीन जनाले उसलाई पुलुक्क हेरे र नहडबडाई आफ्नो काममा लागिरहे । पछाडि उभिएको केटो उसको नजीक आयो र ‘पाय लागूँ चाचाजी’ को पारामा उसका खुट्टा छोयो ।
‘क्या हो बेटा, फेरि धन्दा शुरू ?’ श्यामलाल मुस्कुरायो । केटो केही बोलेन । श्यामलाललाई जवाफ चाहिएको पनि थिएन । उसले ‘भोलि बिहान चारै जना मेरो घरमा आउनू’ भन्यो र जताबाट आएको थियो, उतै फर्क्यो ।
भोलिपल्ट बिहान सातै बजे उनीहरू उसको घरमा हाजिर भइसकेका थिए । ‘मामाघर जान मन लाग्यो ?’ भन्दै उसले दपेटे जस्तो गर्‍यो र उनीहरूका लागि चिया मगायो । अनि भन्यो, ‘जरिवाना त छँदैछ, आम्दानीको हिस्सामा घोटाला नगर्नू नि । नत्र ठीक हुनेछैन ।’
‘जो आज्ञा चाचाजी,’ उनीहरूले खुट्टा छोए र बिदा भए ।
तपाईं भन्नुहोला, श्यामलालले कस्तो आम्दानीको कुरा गरेको ? त्यो पनि सुन्नोस् । गाउँमा बलात्कार त पहिले पनि हुन्थ्यो, तर केही वर्ष यता केटाहरूले त्यसलाई बकाइदा आफ्नो धन्दा बनाएका थिए । त्यो तिनका लागि कमाइको माध्यम थियो । उनीहरू आवेश र उत्तेजनावश होइन, ससाना समूह बनाएर योजनाबद्ध रूपमा बलात्कार गर्थे र प्रायः गरीब परिवारका युवतीलाई आफ्नो शिकार बनाउँथे । कम्तीमा एक, नत्र दुई जनाले मोबाइलबाट भिडियो खिच्थे र त्यसलाई इन्टरनेट मार्फत बिक्री गर्थे । छिमेकी मुलुकहरू मात्र होइन, कतार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, युएई, साउदी अरेबिया जस्ता देशमा समेत त्यसको उच्च माग थियो । त्यही आम्दानीको हिस्सा मागेको थियो श्यामलालले ।
उसले सित्तैं केही मागेको थिएन । केटाहरूलाई कानूनको पञ्जामा फस्न नदिने र पीडितसँग मिलापत्र गराएर उन्मुक्ति दिलाउने जिम्मा श्यामलाल जस्ताकै हुन्थ्यो, जसले आफूलाई भद्रभलादमी घोषित गरेका थिए र गाउँमा पञ्चायती बसाउँथे । बलात्कार केटाहरूको धन्दा बने जस्तै मिलापत्र गराउनु उनीहरूको धन्दा बनेको थियो । ती मिलापत्र व्यवसायी थिए । बलात्कार मात्र होइन हत्या, कुटपीट, जग्गा विवाद, अंश झगडा, साँध–सीमाना, घरेलु हिंसा लगायत गाउँका हरेक मामिलामा उनीहरू टाउको घुसार्थे र मिलापत्रका नाममा दुवै पक्षबाट सक्तो रकम झारेर आफ्नो खल्ती पोटिलो पार्थे ।
संगीता सामूहिक बलात्कारमा परेको बारे उसको बाबुले रोइकराइ गर्न थालेपछि पञ्चायती बस्यो । निर्णायक भद्रभलादमी पाँच जना थिए । तीमध्ये एउटा श्यामलाल स्वयं थियो, जो धेरैपल्ट बलात्कारमा फेला परिसकेको थियो । जोगेन्दरले आफ्ना दुई बुहारीलाई दहेजको निहुँमा जलाएको थियो । इकवाल सुपारी लिएर मानिसको हत्या गराउँथ्यो । रञ्जितले अंशको जग्गा हडपेर आफ्नै दाजुको उठिबास लगाएको थियो । रहीम जिल्लाभरि गुण्डाका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर, उनीहरूको कुनै पनि मामिला कहिल्यै प्रहरीमा पुगेको थिएन । त्यसैले तिनको मानार्थ ‘भद्रभलादमी’ उपाधिमाथि प्रश्न उठाउने कसैको हिम्मत थिएन ।
पञ्चायतीमा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराइयो र केरकार गरियो । बजारबाट नून, तेल र मसला किनेर घर फर्कन लाग्दा आफूलाई बीच बाटोमै समातेर लछारपछार पार्दै उखुबारीभित्र लगेर चार जनाले पालैपालो बलात्कार गरेको र भिडियो खिचेको संगीताले बयान दिई । ऊ चारै जनालाई राम्ररी चिन्दथी । उनीहरूले संगीताको कुनै कुरा प्रतिवाद गरेनन् र आफ्नो अपराध विना हिचकिचाहट स्वीकार गरे । संगीता रोइरहेकी थिई । उनीहरूको अनुहारमा भने ग्लानिको रेखासम्म थिएन ।
सबैका कुरा सुनेपछि भद्रभलादमीले एक छिन छलफल गरेजस्तो गरे र उनीहरूका तर्फबाट श्यामलालले निर्णय सुनायो, ‘जवानीमा केटाहरूबाट कहिलेकाहीं गल्ती भइहाल्छ । यिनीहरू नासमझ छन् । जवान भइसकेकी संगीताले पनि एक्लै हिंडडुल गर्न हुँदैनथ्यो । तर जे हुनु भइहाल्यो । अब कुरा बढाएर कसैलाई फाइदा छैन । गाउँमा सबैले मिलेर आआफ्नो ठाउँमा बस्नुमै कल्याण छ । आजको मुद्दामा हाम्रो निर्णय यो छ कि संगीतामाथि बुरा काम गर्ने चारै जनाले २०–२० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आधा रकम समाज सुधारका लागि खर्च गर्न राखिनेछ र आधा संगीतालाई दिइनेछ ।’
मिलापत्रको कागज उसले घरबाटै तयार पारेर ल्याएको थियो । त्यसलाई गोजीबाट निकालेर भन्यो, ‘पञ्चायतीको निर्णय अनुसार यसमा दुवै पक्षले सही गर ।’
चार जना केटाहरूले त फटाफट सही गरे तर संगीताको बाबुले सही गर्न मानेन । उसको भनाइ थियो, ‘मेरी छोरीको जिन्दगी बर्बाद भयो । यसले न्याय पाउनुपर्छ ।’
भद्रभलादमीले उसको कुरा सुनेनन् । ‘न्यायको बखेडा निकालेर ठूलाबडालाई सजाय दिलाउन खोज्ने ?’ भनेर हप्काए र हात तानेर मिलापत्रमा जबर्जस्ती ल्याप्चे ठोकाइदिए ।
चार मध्ये दुई जनाले २०–२० हजार रुपैयाँ तत्काल बुझाए । ‘यो समाज सुधारका लागि’ भन्दै त्यो रकम पाँचै जना भद्रभलादमीले बराबरी बाँडेर लिए । ‘बाँकी पैसा आएपछि तिमीलाई दिउँला,’ श्यामलालले संगीताको बाबुलाई भन्यो ।
बाँकी दुई जनाले दुई दिन पछि आआफ्नो भागको जरिवाना बुझाए । तर संगीताको बाबुले एक महीना बित्दा पनि पैसा पाएन । पैसा माग्दा पहिले त श्यामलालले आलटाल गर्‍यो, पछि ‘बढी किचकिच गरे घरमा ताल्चा ठोकेर गाउँबाटै निकालिदिने’ धम्की दिन थाल्यो । संगीता भने दुब्लाएर सिठ्ठी हुन लागेकी थिई ।
तपाईंलाई लागिरहेको होला, संगीताको बाबु प्रहरीकहाँ किन नगएको ? कानूनी कारबाहीतिर नलागेर पञ्चायतीका पछाडि किन दौडिएको ? तर, प्रहरीकहाँ जान सजिलो थिएन । पञ्चायतीको निर्णय नमानेर प्रहरीकहाँ पुग्दा एक त भद्रभलादमीले थप दण्डसजाय गर्ने डर हुन्थ्यो, अर्को, प्रहरीले उजूरी नै दर्ता गर्दैनथ्यो । ‘गाउँको कुरा गाउँमै मिलाऊ’ भनेर फर्काइदिन्थ्यो ।
तैपनि ‘मर्नुपरेपछि खुट्टै तन्काएर’ भन्दै संगीताको बाबु एक दिन प्रहरीकहाँ पुग्यो । प्रहरीले हप्कायो, ‘मिलापत्र गरिसकेको होइन ? फेरि किन यहाँ आएको ?’ त्यसपछि ऊ सिडियो अफिस पुग्यो । सिडियोले ‘हेरिदिनू’ भनेर उसको निवेदनमा तोक लगाइदिएपछि प्रहरीले उनै भद्रभलादमीलाई खबर गरेर आफ्नो कार्यालयमा अर्को पञ्चायती बसायो, जसमा राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि र मानव अधिकारकर्मी समेत उपस्थित थिए । बैठक शुरू हुनै लाग्दा त्यही क्षेत्रबाट चुनिएको प्रदेश सभा सदस्य पनि आइपुग्यो ।
‘खुरुक्क कानूनी कारवाही नगरेर पञ्चायतीको नाटक किन ? नयाँ कानून आएको थाहा छैन ? यो सरासर गैरकानूनी हो,’ मानव अधिकारकर्मी पड्कियो ।
सबै जना हाँसे । गाउँपालिका अध्यक्षले चेतावनी दियो, ‘यो हाम्रो परम्परा हो । समाजको विवाद समाजमै मिलाउनुपर्छ । नत्र गाउँको इज्जत रहँदैन । कानूनको कुरा गरेर तपाईं यसमा हस्तक्षेप गर्ने कोशिश नगर्नोस् ।’
तीन राउन्ड चिया र एक सेट खाजा छलफल गरेपछि प्रहरी कार्यालयको पञ्चायतीले पनि गाउँकै पञ्चायतीको निर्णय सदर गर्‍यो । अनावश्यक कुरामा निवेदन हालेर सबैलाई दुःख दिएको भन्दै संगीताको बाबुलाई तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो, तीन दिनभित्र नबुझाए हिरासतमा पठाइने गरी । गाउँपालिका अध्यक्ष ‘गाउँको इज्जत जोगिएकोमा’ खुशी देखिन्थ्यो ।
पञ्चायती सकेर फर्कन लाग्दा बाटोमा प्रदेश सभा सदस्यले भन्यो, ‘बलात्कार नै पेशा हुन थाल्यो भने त अति हुन्छ । होश गर्नोस् है अध्यक्षज्यू, गाउँको इज्जत जाला नि ।’
उनीहरूको पछि लागेको श्यामलाल बोल्यो, ‘जागीर छैन । आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि राज्यले हेर्दैन । अनि युवाहरूले पकेट खर्च निकाल्न यसो एक–दुईवटा रमाइला भिडियो बनाए भने तपाईं–हाम्रो के बिग्रन्छ ? गाउँको कुरा गाउँमै मिलाएकै छौं क्यारे !’
त्यसपछि कोही बोलेन ।
साँझ श्यामलाल घर पुग्दा चार मध्ये एउटा केटो हाजिर थियो । उसले श्यामलाललाई खुट्टा छोएर ‘पायलागी’
गर्‍यो र एउटा खाम हातमा राखिदियो । खामभित्र हजारका पाँच नोट थिए ।
‘कति छिटै त ?’ श्यामलालको मुखबाट निस्कियो ।
‘यसपालिको भिडियो निकै सफा र उत्तेजक बनेछ । राम्रो डिमान्ड छ । निकै आम्दानी होला जस्तो छ । हजूरको हिस्सा पुर्‍याउन आइराख्छु,’ ऊ मुस्कुरायो ।
संगीताको बाबु सबैतिरबाट निराश भएर घर पुग्यो । जरिवाना तिर्ने उपाय थिएन, तीन दिन पछि हिरासतमा पुगिने पक्का थियो । ऊ खुइय सास फेर्दै शून्यतिर हेरेर टोलाइरह्यो । बाबुको हालत देखेपछि संगीताका आँखाबाट बगिरहेका आँसु एकाएक रोकिए ।
बिहान घाम झुल्कँदा संगीता घर अगाडिको रूखमा झुण्डिएकी थिई ।
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७७ ०९:४१